Description/subject: Mission: "ဤပညာရေးကွန်ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပညာရေးမူဝါဒ (National Education Policy)တစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။"
Title: NNER's Statement on the National Education Bill Printed in "The Mirror (Kyemon)" on the 16-17 March, 2014 - ကြေးမုံသတင်းစာ (မတ်လ ၁၆-ရ-၂၀၁၄) တွင်ဖော်ပြထားသည်�
Description/subject: ကြးမုံသတင်းစာ (မတ်လ ၁၆-ရ-၂၀၁၄) တွင်ဖော်ပြထားသည့် အမျိုးသားဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဝေဖန်ချက် အကျဉ်းချူပ်
Title: NNER Letter RequestingaDialogue with the Government, Hluttaws and Education Organizations - ပညာရေးဥပဒေကို ကျောင်းသားများသပိတ်မှောက်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ�
Description/subject: ပညာရေးဥပဒေကို ကျောင်းသားများသပိတ်မှောက်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊ လွှတ်တော် နှင့် ပညာရေး အဖွဲ အစည်းများသို ပန်ကြားချက်
Title: The Development of Vocational Education in Myanmar (1988 –1997)
Description/subject: Abstract: "Vocational Education as an integral aspect of human resources development is one of the principal means of improving the ability of the individuals to contribute effectively to society. As it provides access to skills and entry routes into the labour market, it can be an important route towardsabetter life. Since investing inastrong, public vocational education sector must be crucial in knowledge - based societies as well as in developing countries, the Government of Myanmar has been implementing to promote the vocational education asavital aspect of educational process in the country. At present time, the study of vocational education focuses on discussion of vocational factors in education. This study is an attempt to reveal how the Government of Myanmar establishing the Department of Technical, Agricultural and Vocational Education endeavours to promote societal and economic development introducing vocational education. It analyses the vocational programs, training, curriculum, and syllabus introduced in Myanmar. Based on the statistics of vocational education from 1988 to 1997, this paper makes an effort to assess the development of vocational education in Myanmar.".....Paper delivered at the International Conference on Burma/Myanmar Studies: Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges: University Academic Service Centre (UNISERV), Chiang Mai University, Thailand, 24-­26 July 2015.
Title: The Development of NNER Journey - ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကွန်ရက် (NNER) ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊
Description/subject: "NNER ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အစပျိုးသည့် စုစည်းမှုသည် ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ရည် ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ကိုသုံးသပ်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် အကြံဥာဏ်များ ထွက် ပေါ်ရန်ဖြစ်သည်။ စတင်ကတည်းက အတူတကွပါဝင်သည် စုစည်းမှုမျိုးဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ သည်။ ဆရာ ကို တာ(ဒေါက်တာသန် လွင်မောင်) က ကိတ်မုန့် ကို အတူတကွဖုတ်ဖို့ အကြံပေးပါသည်။ “အရသာရှိတဲ့ ကိတ်မုန့်ဖြစ်ရင်အားလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လို့ အားလုံးအတွက်ဂုဏ်ရှိတယ်။ မီးများလို့ တူးသွားရင် တောင်မှ အားလုံးကအတူတကွ တာဝန်ယူကြတယ်” ဟုပြော ပါသည်။"
Title: NNER 2nd Education Conference Report - ညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပည�
Description/subject: နိဒါန်း။ ။ "ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER) ၏ ဒုတိယအကြိမ် ပညာရေးညီလာခံကို ရန်ကုန် မျက် မမြင် ခရစ်ယာန် မိတ်သဟာရခန်းမ၊ ခဝဲခြံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၈၊ ၁၉၊၂ဝ) သုံးရက်တာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် ညီလာခံကိုလည်း ဤခန်းမ၌ပင် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ(၈-၉) ရက်များတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပညာ ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ပညာရေးညီလာခံကို ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ အတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။  NNER ၏ ပထမအကြိမ်ညီလာခံအပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများကို တင်ပြခြင်း...  ပညာရှင်စကားဝိုင်း (၆)ခု ကျင်းပခြင်း...  ကမ္ဘာ့ ပညာရေးညီလာခံ (၂၀၁၅) အင်ချွန်းကြေညာစာတမ်းအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း...  အဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ ခွဲ၍ NNER ၏ လုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း၊ ကွန်ရက်ဖွဲ စည်းပုံနှင့် ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် အကြံပြုခြင်း။...  ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် NNER ကွန်ရက်များတိုးချဲ့ ဖွဲစည်းရန်အတွက် အစပျိုးဆောင်ရွက်မည့်သူများ အမည်စာ ရင်းတင်သွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ညီလာခံကို NNER ၏ ဦးဆောင်ပညာရှင်တစ် ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာမင်းသိမ်းက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဖွင့်မိန် ခွန်းတွင် ကျောင်း သားသမဂ္ဂ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကို မြှင့်တင်ပြောကြားသွားပါသည်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားမှု တွင် ကျောင်းသားများ၊ NNER တို နှင့်အတူ ဝန်းရံပြည်သူများ၏ ထောက်ခံပါဝင်မှုကြောင့် ပညာရေးစနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရွေ့ လျားမှုရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပါသည်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း တောင်းဆိုချက်များရသည့်အချိန် ထိ ထပ်မံပြင်ဆင်ရန် ဆက်လက်တောင်းဆိုရမည်ဟုလည်း ပြော ကြားသွားပါသည်။ ပထမအကြိမ်ညီလာခံ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့် (ကွယ်လွန်သူ) ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၏ မိန် ခွန်းမှ “ပညာ ရေးစနစ်ကို အမြစ်ကလှန်ပြုပြင်ရမယ်” ဆိုသည့် စကားကို ထပ်လောင်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။"
Title: NNER Working Group Report Updated - ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်
Description/subject: နိဒါန်း။ ။ "ပထမအကြိမ် ပညာရေး ညီလာခံကျင်းပခဲ့ပြီး ၂-နှစ် အကြာ တွင် ကျင်းပ သည့် ဤ ဒုတိယ အကြိမ် ပညာရေး ညီလာ ခံ သို့ ကြွရောက်လာကြသူများကို ကျေးဇူးတင် ပါသည်။ NNER နှင့် ကျောင်းသားများ ၏ ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါ ၀င်ကူညီ အားပေး ကြသူများကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါ သည်။ ဤ အစီရင်ခံစာတွင် NNER ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများနှင့် NNER ၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားများကို တင်ပြပါမည်။ ဤ အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ NNER အလုပ် အဖွဲ မှ ထုတ်ဝေသည့် ‘ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အာမခံခြင်း’ မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ညီလာခံသို့ တင် သွင်းပါသည်။"
Title: Comparison of 11 Points and National Education Law Amendment - “ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ” ကို လေးပွင့်ဆို င်သဘောတ�
Description/subject: “အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ” ကို လေးပွင့်ဆိုင်သဘောတူညီချက် များ နှင့် ကွဲလွဲချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပြဇယား။
Title: NNER and Students 11 Points Demand FAQs- NNER နှင့် ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက် ( ၁၁ ) ချက်အပေါ် မေးလေ့  ရှိသည့်  မေးခွန်�
Description/subject: NNER နှင့် ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက် (၁၁) ချက်အပေါ် မေးလေ့ ရှိသည့် မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ
Title: Article on Higher Education Teaching System - တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များတွင် သင်ကြားနည်းစနစ်ဘယ်လိုဖြစ်သင့်သလဲ
Description/subject: "တက္ကသုိုလ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင် စီမံခန် ခွဲရေးစနစ်ပြင်ရုံ အဆောက်အဦးများတိုးချဲ့ ရုံနှင့် မလုံလောက်ပါ၊ သင်ကြားခြင်း သင်ယူခြင်းနည်းစနစ်များကိုလည်း ပြုပြင်ရပါမည်။ တက္ကသိုလ်များရင်ဆိုင်နေရသည့် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ နှစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ပထမအခြေအနေမှာ ပါမောက္ခများ၊ သုတေသနပညာရှင်များလေ့လာတွေ့ ရှိထားသည့် ပညာရပ်များကို ပို့ ချပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအခြေအနေမှာ မမြင်နိုင်သေးသည့်အနာဂတ်ကို ကျောင်းသားများရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်ဆယ်နှစ်ကြာလျှင်ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်ပညာရပ်များ၊ အလုပ်အကိုင်အသစ်များ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ ကို ယနေ မသိနိုင်သေးပါ။ တက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း နည်းစနစ်များသည် အထက်ပါအခြေအနေ နှစ် ရပ်ကို ရင်ဆိုင် ရန်ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။"
Description/subject: "လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှ သဘောတူထားသည့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းေ က်ာမတီက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ၂၆.၃.၂၀၁၅ နေ့ တွင် အတည်ပြုလိုက်သည့်အပေါ် NNER ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်"
Title: Teacher Seminar Statement - ဒီမိုကရေစီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီး ၌ဆရာ၏အခန်းက ဏ္ဍ
Description/subject: "ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (NNER) လုပ်ငန်းအဖွဲ့ မှ ဦးဆောင်၍ “ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အခန်းက ဏ္ဍ” ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ုကုန်မြို့၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ တော်ဝင် နှင်းဆီခန်းမ တွင် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉-၃ဝ) ရက်နေ့ များတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ ပါ ၀င်မှုကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။"
Title: Comments on National Education Law Amendment - “ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ” အပေါ် သုံးသပ်ချက်
Description/subject: "အဓိကအကြံပြုချက်များမှာ: (၁) ပညာရေးစီမံခန် ခွဲမှုတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်... (၂) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကလေးငယ်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များအရ မိခင် ဘာသာ စကားအခြေပြု ဘာသာစကား(၃) မျိုးစနစ်ကျင့်သုံးရန်... (၃) မသန်စွမ်းကလေးများ၏ပညာရေးလိုအပ်ချက်အရလည်းကောင်း၊ လူ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစား သောအားဖြင့်လည်းကောင်း ကလေးအားလုံးအတူအကွ ပညာသင်ကြားရေး (Inclusive Education) စနစ်ကျင့်သုံးရန်... (၄) ဆရာများ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီး အရည်အချင်းမြင့်မား အောင်ဆောင်ရွက်ရန်... (၅) ကျောင်းသားများ၏လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြာဆိုပိုင်ခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ စည်းခွင့် များကို အာမခံရန်... (၆) ကျောင်းအလိုက် (သို့မဟုတ်) ဒေသအလိုက်လွတ်လပ်စွာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖွံ့ဖြိုး ခွင့် ရှိရန်... (၇) ကျောင်းသားများ၏သင်ယူမှုကို တိုးတက်စေသော သင်ကြားနည်းစနစ်နှင့် စစ်ဆေးနည်း စနစ်များကျင့်သုံးရန်... (၈) ပညာရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူများတွင် လူမှုရေးတရား မျှတမှု (social justice)၊ လူဂုဏ်သိက္ခာ (human dignity)၊ နှင့် လွတ်လပ်ခွင့် (freedom) တို့ ကို ထည့်သွင်းရန်... (၉) ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ တွင် GDP ၏ ၄-၆% (သို့မဟုတ်) တနိုင်ငံလုံးအသုံးစရိတ်၏ ၁၅-၂၀% ကို ပညာရေးအသုံးစရိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် အထက်ပါ အကြံပြုချက်များအတွက် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထား ပါသည်။"
Title: NNER Statement on Students Meeting - နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားထု အရေးပေါ်အစည်းဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် NNER ၏ သ�
Description/subject: "ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နုိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (NNER) သည် လွှတ်တော်နှင့်အစိုးရတို မှ အတည် ပြုပြ ဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ အပေါ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား ထု အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေမှုများကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်။ အဆိုပါ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေသည် ကျော င်းသားပြည်သူများ၏ဆန္ဒသဘောထားများ ကို မျက်ကွယ်ပြု၍ ဒီမိုကရေ စီစံနှုန်းများနှင့်ဆန့် ကျင်ကာ ရေးဆွဲအတည်ပြုထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လွှတ်တော်နှင့်အစိုးရတိုက တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ အလေးထားမှုတို့ နှင့်အတူ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်း လုိုက် ပါသည်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏အရေးဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှုများကို မျက်ကွယ်ပြု၊ လစ်လျူရှုမည်ဆို ပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များသည် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရတို့ ၏ တာဝန်သာကြောင်း သတိပေးအပ်ပါ သည်။"
Description/subject: "NNER has done on education reform about 28 seminars, several meetings and discussions over the years 2012 and 2013. It collected advice, opinions and suggestions from various groups –students, teachers, monks, National’s Literature & Cultural associations, political parties, persons-with-disabilities organizations and educationalists. In June 2013, the national convention on education was held and principles were agreed upon. These principles on educational reform were presented to the Parliament both Upper (Pyithu Hluttaw) and Lower House (Amyotha Hluttaw), the Government and the People. It was known that National Education Law has been approved by the Parliament on 31 July 2014. But there are still some disagreements and so hereby this statement is issued: (1)"National Education Commission" as stated in Chapter IV of National Education Law is not necessary. "Higher Education Co-ordination Committee" as stated in Chapter V, Section 27 is not also necessary. Apart from military and religious academies,all the educational institutions vis-a-vis Basic Education, Higher Edu cation and Vocational Education should be under The Ministry of Education. Universities and colleges must be autonomous and on necessity, they may cooperate on democratic principles. For academic quality assurance, assessments must be done byateam of independent specialists... (2) In the National Education Law, Inclusive Education should be defined clearly, and the rights of the children including the children-with-disabilities must be prescribed. NNER seriously opposes what appears to be the discrimination of the children-with-disabilities: the principles as shown in Section 2, Sub-section (p), Section 4, Sub-section (c), Section 37 and Section 41, Sub-section (b) are found to be against the principles of Inclusive Education. On7December 2011, The Government had signed the agreement of United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN-CRPD), but it is absolutely neglected and the National Education Law is drafted on the concept of Special Needs Education which s till allows the discrimination. Hence the law must be revised... (3) For the minorities, NNER's principle is Mother tongue-based Multilingual Education – Mother tongue, Burmese and English should be taught. The individual school boards itself has to decide which Mother tongue they are going to teach... (4) NNER aims at the democratic education which guarantees the Right to Association, the Right to Assembly, the Right to Free Speech and the Right to Choice. NNER seriously opposes the l aw as shown in Section 4, Sub-section (m) which states the decentralization will be applied on condition that the teachers are moral, responsible and able to make decisions is rather insulting; it appears to erode the personal prestige of teachers... (5) NNER does not agree with the law as shown in Chapter XI. Section 57, Sub-section (a), which states that the Basic Education schools must be managed by the Ministry of Education: the ministry rather should play the role of facilitator; the school management should be done by the respective school boards, which constitute the school principal, the teache rs, parents and the respectable citizens.... (6) The National Education Law should state distinctly that curriculum should be flexible and school-based vis-a-vis Basic Education Curriculum as shown in Section 39, Sub-section (f) and (g). For standardization requirement, "minimum learning capacities" should be used... (7) NNER does not agree with the law as shown in Section 21, Sub-section (a), which states that student-centered approach will be the only pedagogical way: rather the learning-centered approach which encompasses all the pedagogy. As to the assessment, formative assessment, rather than summative must be used: the summative assessment encourages the rote. NNER rejects the examinations to be held at the end of Primary and Secondary Education on the same reason that these examinations are testing the summative.... (8) Instead of compulsory and free Primary Education as shown in Section 17, it should be compulsory and free Secondary Education: the reason is to safeguard the children's Rights; the respective ministries, state authorities, parents & guardians, schools, international organization s and civil society are responsible for that... (9) Regarding the finance of Education sector, the Muscat Agreement, UNESCO, 2014 advises to use 4-6% of GDP or 15-20% of National Budget: National Education Law must declare that amount is to be used without fail."
Title: The Statement Issued by NNER: In response to the National Education Law approved by the Parliament - ပြည်ထောင်စု အလွှတ်တော်က အတည်ပြုသော အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ
Description/subject: ပြည်ထောင်စု အလွှတ်တော်က အတည်ပြုသော အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေအပေါ် NNER ဧ။် သဘေားထား ထုတ်ပြန်ကြောညာချက်
Title: NNER Statement on Myanmar Education Reform - မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေည
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Title: NNER Statement on the Seminar on Mother Tongue Based Multilingual Education - မိခင်ဘာသာစကားအခြေပြု ဘာသာစကားစုံ ပညာရေးဆွေးနွေပွဲ
Title: Education Policy Recommendations_ for the Parliament (Burmese/မြန်မာဘာသာ)
Title: Statement on Formation of NNER (Burmese/မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။: "မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေး တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်နေပါသည်။ အစိုးရကလည်း ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် ကြံဆနေသည်။ အောက် တိုဘာ ၆-၇၊၂၀၁၂၊ ခရစ်ယာန်ဓမ္မတက္ကသိုလ် အင်းစိန်တွင် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်ရာ တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် မြန်မာ့ပညာရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြသည့်အဖွဲ အစည်းများ (ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းများ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန် ပညာရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားပညာရေးအဖွဲ အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များနှင့် အဖွဲ အစည်းများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ လူငယ်အဖွဲ့ အစည်းများစသည်) နှင့် ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စား သောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲေ ဆာင်ရွက်ပုံမှာ အားလုံးကရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တန်းတူ ရည်တူ ပါဝင်ေ ဆွးနွေး ဆုံးဖြတ်သော ဒီမိုကရေစီနည်းကျေ ဆာင်ရွက်မှု ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသောအောက်ပါ ရလဒ်များကို ပြည်သူလူထု၊ လွှတ်တော်၊ အစိုးရ၊ မီဒီယာနှင့် ဥပဒေပညာရှင်များ အားလုံး သို့ တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။"